AirPlay 2 manjavona amin'ireo betas farany natombok'i Apple | Avy amin'ny mac aho
Ao amin'ny betas voalohany an'ny iOS 11.3 sy tvOS 11.3 niseho ny iray amin'ireo lahasa andrasan'ny mpampiasa indrindra: ny taranaka faharoa amin'ny fenitra AirPlay, izany hoe: AirPlay 2. Na izany aza, raha mamaky anay ianao dia ho fantatrao fa ora vitsy lasa izay dia natombok'i Apple ny beta fahatelo amin'ireo rafitra fiasa ireo. Ary ny kinova vaovao an'ny AirPlay dia tsy hita intsony amin'ny lafiny roa.
Amin'ity fenitra vaovao ity dia afaka mandefa atiny amin'ny solosaina maromaro ny mpampiasa, iray amin'ireo lesoka lehibe amin'ny kinova ankehitriny azonao ankafizinao amin'ireo solosaina samihafa eny an-tsena. Noho izany, ny orinasa Cupertino, izay rahateo, premieres foibe ofisialy vaovao, mety hanemotra an'ity endri-javatra ity amin'ny kinova iOS 12 vaovao, ohatra.
Ahoana raha tsy manana AirPlay 2 eo anelanelantsika isika? Raha mamindra izany amin'ny fampiasana HomePod isika dia midika izany fa, izao, ny safidy "Multi-room" dia tsy azo ampiasaina hampiasa mpandahateny stereo roa marani-tsaina. Ho fanampin'izany, tsy ho vitantsika ny mandefa ilay hira mitovy amin'ny mpandahateny roa na ny atiny audiovisual mitovy amin'ny Apple TV maro miaraka.
Azo atao tsara ilay rindrambaiko manana hadisoana kely ary amin'ny volana martsa ho avy izao dia mbola tsy voavaha tanteraka. iOS 11 tonga teny an-tsena niaraka tamin'ny lesoka maro ary io zava-misy io dia nahatonga ny marika hieritreritra ny hametraka vokatra voadio bebe kokoa eny an-tsena hatramin'ny nanombohany.
Noho izany, amin'izao fotoana izao - ary aorian'ny 7 taona tsy hanatsarana ny fenitra - tsy maintsy manohy miandry ny fiasa isika. Mazava ho azy, tsy mihoatra ny faran'ny taona, fa ny zavatra azo antoka indrindra dia ny tsy fisian'ny AirPlay 2 amin'ny kinova vaovao amin'ireo sehatra samihafa ao amin'ny orinasa. Etsy ankilany, 9to5mac, iza no nanako ny fiovana, tsy mbola nahazo teny avy amin'ny orinasa momba ny fahatarana ianao ary ny fisintonana ny asa andrasana amin'ny beta farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » AirPlay 2 manjavona amin'ireo betas farany natombok'i Apple